Tic Tac Toe 🥇 Tamba pamhepo mahara kubva emulator.online
Tic Tac Toe Ndiani asina kumbobvira atamba tic-tac-chigunwe? Iyi ndeimwe yeanonyanya kufarirwa uye mafaro ekuvaraidza ekurangarira. Kunze kwekuve wakapusa uye nekukurumidza, mutambo uyu unobatsira kuvandudza zvakanyanya kugona kwako kwepfungwa.
Tic Tac Toe: sei kutamba nhanho nhanho? 🙂
Kutamba Blackjack online mahara, chete tevera iyi nhanho-nhanho mirairo :
Step 2 . Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watotaridza pachiratidziri. Ungofanire kubhuya tamba uye iwe unogona kutanga kutamba, sarudza kutamba uchipesana nemuchina kana tamba neshamwari. Iwe unogona zvakare kusarudza iyo nhamba yemakwere iyo bhodhi inofanira kuve nayo.
Step 4. tora matatu emataira ako kuti aenzanise akatwasuka, akatwasuka, kana diagonally.
Kune akati wandei masaiti anogadzira Tic Tac Toe inowanikwa mahara. Unogona kutamba ne robot kana nemunhu. Kunyangwe Google inoita kuti iwanikwe. Muchidimbu, iwe unongoda kutsvaga "tic-tac-chigunwe" papuratifomu.
Pamusoro pazvose, mutambo uyu wakakodzera kune chero munhu ane makore mashanu.
Chii chinonzi Tic Tac Toe? 🤓
Tic Tac Toe mutambo uri nyore kwazvo wemitemo, uyo usingaunze matambudziko makuru kune vatambi vawo uye unodzidziswa zviri nyore. Kwakatangira hakuzivikanwe, nezviratidzo zvekuti inogona kunge yakatanga muIjipita yekare, uko matairesi akavezwa padombo, ayo aive anopfuura makore mazana matatu nemashanu, akawanikwa.
Chinhu chemutambo kuisa O kana matatu X's munzira yakatwasuka.
Nhoroondo yeTic Tac Toe 😄
Mutambo wakave wakakurumbira mu England mu 19th remakore , apo vakadzi pavakaungana masikati machena kuti vataure uye vashongedze. Nekudaro, vakuru, nekuti vaive vasisakwanise kumonera nekuda kwemaziso avo asina kusimba, vakavaraidzwa nemutambo wakapihwa zita Noughts uye Muchinjikwa .
Asi mavambo emutambo uyu akura zvakanyanya. Kuchera pa Kurna tembere muIjipita yakawana mareferenzi nezvayo kubva pa14 muzana ramakore BC . Asi zvimwe zvakawanikwa pakuchera matongo zvinoratidza kuti Tic Tac Toe uye zvimwe zvakafanana zvekuvaraidza zvakagadzirwa zvakazvimiririra mumatunhu akasiyana epasi : vaitambidzwa zvekare muChina yekare, pre-Columbian America nehumambo hweRoma, pakati pevamwe.
Mu 1952, the EDSAC mutambo wecomputer OXO yakagadzirwa, uko mutambi akadenha komputa mumitambo yeTic Tac Toe. Saka pakamuka imwe yemitambo yemavhidhiyo yekutanga ine nhau.
Tic Tac Toe Mitemo 📏
Bhodhi iri mitsara mitatu nekoramu nhatu matrix .
Vatambi vaviri vanosarudza mucherechedzo mumwe, kazhinji a denderedzwa (O) uye muchinjikwa (X).
Vatambi vanotamba neimwe nzira, kufamba kumwe nekutendeuka , panzvimbo isina chinhu pabhodhi.
Chinangwa ndechekuti tora madenderedzwa matatu kana machinjikwa matatu akateedzana , ingave yakatwasuka, yakatwasuka kana diagonally, uye panguva imwechete, pese pazvinogoneka, kudzivirira mupikisi kuhwina pane inotevera kufamba.
Kana mutambi akazadzisa chinangwa, zviratidzo zvese zvitatu zvinowanzoyambukwa.
Kana vese vatambi vachigara vachitamba zvavanogona, mutambo uchagara uchipera mukutamba.
Kufunga kwemutambo kuri nyore kwazvo, saka hazvinetse kubata kana kubata nemusoro zvese zvingangoitika kuti ufambe zvakanaka, kunyangwe huwandu hwenzvimbo hwakakura kwazvo, hwakawanda hwakaenzana uye mitemo iri nyore.
Neichi chikonzero, zvakajairika kuti mutambo uve dhiri (kana "kukwegura").
mukundi : Kana uine zvidimbu zviviri mumutsara, isa chechitatu.
misa : Kana mupikisi aine zvidimbu zviviri zvakateedzana, isa chechitatu kumumisa.
Triangle - Gadzira mukana uko iwe unogona kuhwina munzira mbiri.
Bvisa mukwikwidzi katatu
pakati : Tamba pakati.
Kona isina chinhu - Tamba mukona isina chinhu.
Nekuda kwekufunga zvine musoro, ichi chitandadzo chine mamwe manomano anobatsira kana uchibva.
1 - Isa chimwe chezviratidzo mukona rebhodhi
Ngatitii mumwe wevatambi akaisa X mukona. Iri zano rinobatsira kukurudzira muvengi kuti atadze, nekuti kana akaisa O munzvimbo pakati kana padivi pebhodhi, anogona kuzorasikirwa.
2 - Bvisa mupikisi
Nekudaro, kana anopikisa akaisa O pakati, iwe unofanirwa kuedza kuisa X pamutsetse unongova nenzvimbo isina chinhu pakati pezviratidzo zvayo. Nekudaro, iwe unenge uchivharira anopikisa uye nekugadzira mikana yakawanda yekukunda kwako.
3- Wedzera mikana yako yekukunda
Kuti uwedzere mikana yako yekukunda, inogara iri pfungwa yakanaka kuisa chiratidzo chako pamitsetse yakasiyana. Kana iwe ukaisa maX maviri akateedzana, wako anokumhan'arira anozviona nekukuvharira. Asi kana iwe ukaparadzira X yako pane imwe mitsara, iwe unowedzera mikana yako yekukunda.
Nzira yekugadzira munhu Tic Tac Toe?
Sarudza nzvimbo yakavhurika, yakati sandara yekutamba. Tevere, govera hula hoops mumitsara mitatu nemitsara mitatu, kunge pepa tic-tac-toe mutambo bhodhi. Usasiye nzvimbo yakawandisa pakati pehula hoops.
Kana iwe uri kutamba mukati meimba ine yakaoma pasi, shandisa tepi kugadzira bhodhi . Pane kongiri, iwe unogona zvakare kudhirowa mitsara nechoko.
Saka kuti pasave nemunhu anokuvara panguva yemutambo, tarisa pasi maburi, marara ane njodzi (senge girazi rakaputswa), kana imwe mhando yenjodzi, yakaita semidzi nematombo.
Edza kumisikidza bhodhi rinopfuura rimwe kana uine nhamba huru yevatambi. Sezvineiwo, timu yega yega inofanirwa kuve neanopinda mumwe kusvika vatatu vatori vechikamu
Iyo yemunhu tic-tac-chigunwe mutambo unogona kutambwa wega kana muzvikwata. Muchiitiko chechipiri, timu yega yega inofanirwa kuve nenhengo dzinokwana nhatu. Bhodhi rimwe nerimwe rinofanirwa kuve nezvikwata zviviri zvinokwikwidza, rimwe kudivi rega.
Iwe unogona kutotendera zvikwata zvine vatambi vanopfuura vatatu, asi izvi zvinodzora mutambo uye zvinogona kupedzisira zvofinha vatambi vadiki.
Sarudza timu kuti itange
Sarudza ndiani achatanga kufamba nemari kana mari. Imwe sarudzo ndeyekukumbira timu yega yega kusarudza mutungamiri kuti atore, achatanga nedombo, bepa, uye chigero. Chikwata chekutanga kutamba chichawana X, nepo chechipiri timu ichatora O.
Kuita kuti mutambo uyu uve chipatapata, kumbira vatambi kukwikwidza mukutenderera uye kutora danho rekutanga kune vanokunda.
Ramba uchitamba kusvikira timu imwe yazadza mativi matatu akateedzana. Ipa masaga mana ejira kuchikwata chimwe nechimwe. Shandisa mabhegi akasiyana-siyana kusiyanisa X kubva kuO. Chikwata chega chega chinofanira kuisa bhegi rimwe pabhodhi panguva imwe kusvikira mumwe wadzo akunda kana mutambo wacho wadhirowa. Kana zvikwata zvine vanhu vanopfuura mumwe chete, kumbira nhengo imwe chete yetimu yega yega kuti vatambe panguva imwe chete.
Bvisa mabhegi kubva kubhodhi kuti utangezve mutambo. Kuitira kuti vatori vechikamu vasaneta nekugara vachitamba pazvikwata zvakafanana, edza kuzvichinjanisa.